Palace Resort 1907 - Heart of Myrtle Beach - 2 Bed/2 Bath Condo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elliott Beach Rentals
U-Elliott Beach Rentals unokuphawula okungu-549 kwezinye izindawo.
Sicela uqaphele ukuthi i-Visa evumelekile noma i-MasterCard kufanele ifakwe efayelini kwa-Elliott Beach Rentals uma kwenzeka kwenzeka okuthile.
Sicela uqaphele ukuthi ubuncane beminyaka yobudala bokungena bungama-25.
Ngobuhle obuvela e-The Palace Resort 1907, izihambeli zingase zizithole zingafuni ukushiya ukunethezeka kwale ndlu eqashisayo. Imindeni izokwenza leli khaya eliqashisayo isonto lonke noma ngaphezulu, kuya ngeholide lesizini e-Myrtle Beach, eSouth Carolina. Ukunethezeka nokunethezeka kuhlangana kuleli gumbi eliqashisayo ukuze unikeze umuzwa ongcono kakhulu weholide ngangokunokwenzeka. I-Palace Resort 1907 inikeza izivakashi iholidi le-oceanview elilangazelelwa yizivakashi eziningi zaseMyrtle Beach.
Njengoba womabili amakamelo okulala anokufinyelela kuvulandi, i-Palace Resort 1907 inikeza indawo eningi ngaphandle ukuze ujabulele indawo yolwandle nolwandle. Njengoba iningi labavakashi abaya e-Grand Strand lizithola selizinze e-Myrtle Beach ngenxa yokunikela kwalo ngolwandle, kuyaqabula ukuthi izindawo eziqashisayo ezifana ne-Palace Resort 1907 zibhekene nenselelo yokuhlinzeka ngendawo yokuhlala eyanele ehambisana nesifiso esikhulu sokujabulela indawo ezungezile. .
I-Myrtle Beach ikhethwa ngokuphindaphindiwe ngenxa yamathuba amaningi ehlinzeka ngamaholidi. Izikebhe zasendaweni ezimbalwa, iMyrtle Beach Boardwalk kanye neSkyWheel zonke yizindawo eziheha izivakashi. Ubumnandi bendawo beMyrtle Beach abukho nje ogwini lolwandle kodwa bugeleza bubuyele emhlabeni ukuze buhlanganise yonke iGrand Strand. Akunandaba ukuthi uhamba kuphi kule ndawo yaseNingizimu Carolina, abavakashi bayohlala bethola ukuzijabulisa noma ukukhangwa ukuze ivumelane nokuthandayo. Ukushoda kwezinto ongazenza ngesikhathi sokuvakasha kwakho olwandle akukaze kube yinto ekhathazayo lapho uvakashele e-Myrtle Beach.
Ngaphezu kwezindawo ezikhangayo zasendaweni kuhlale kunokuningi okwenziwayo okunikezwa khona kanye kule ndawo yokuphumula ephezulu. Igumbi legeyimu linikeza imindeni ukuzizwisa okubophezelayo kuyilapho isikhungo sokufaneleka singasiza ukugcina amakholori eholide engeziwe kusukela ekwenzeni ikhaya elingunaphakade ku-torso. Amachibi okubhukuda amaningana namabhavu ashisayo anezela ekuthandeni kwalokhu kuqashwa kwamaholide.
I-Palace Resort 1907 inikeza izivakashi i-anoceanview kusukela kuvulandi kanye namagumbi okulala, akusoze kwaba nokukhathazeka ngendawo yokuhlala edabukisayo noma ukuntuleka kwendawo ngale condo eqashisayo. Kungani ungabhuki lobu buhle bebhishi namuhla? WONKE AMAGUMBI ANOFINYELELA EBALCONY IGUMBI LOMDLALO EMVALWENI
IZIKHALA EZIM-2 ZOKUPAKA EZIKHONA
Amalineni Ombhede Namathawula Ahlanganisiwe
1 Imibhede Yendlovukazi
3 Imibhede emibili
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-549 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Elliott Beach Rentals